Teny ihany - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-03 > Teny tokana ihany
Indraindray aho mankafy ny fandehanana mozika any amin'ny lasa. Ny Bee Gees efa tranainy tamin'ny taona 1960 dia nitondra ahy tamin'ny lohahevitro androany teo am-pihainoana ny fandefasana ny "Teny". "Teny fotsiny izany, ary ny teny ihany no ananako mba hahazoako ny fonao."
Inona no hira tsy misy teny? Ny mpanoratra ao amin'ny Schubert sy Mendelssohn dia nanoratra "hira tsy misy teny", saingy tsy tadidiko manokana na iray aza. Inona no fanompoana ataontsika raha tsy misy teny? Rehefa mihira hira vaovao isika dia mandinika tsara ny teny na dia tsy mahaliana loatra aza ny tononkira. Lahateny malaza, toriteny mifindra, literatiora lehibe, tononkalo mana aingam-panahy, eny fa na dia mpitari-dàlana fitetezam-paritany, tantara an-tsokosoko sy tantara foronina dia samy manana ny itoviana zavatra iray ihany izy ireo: teny. Jesosy, ilay mpamonjy lehibe ny olombelona rehetra, mitondra ny lohateny hoe "Logos" na "Ny Teny". Ny Kristiana dia milaza ny Baiboly ho Tenin 'Andriamanitra.
Raha noforonina isika dia nomena fiteny ny olombelona. Niresaka mivantana tamin'i Adama sy Eva Andriamanitra, ary tsy isalasalana fa nifampiresaka izy ireo. Nampiasa teny mampihetsi-po be i Satana, ka nanohina ny fon'i Eva, ary naveriny tamin'i Adama indray ilay izy. Nahatsiravina izany vokatra izany raha ny kely indrindra.
Taorian'ny safo-drano dia nitovy ny fitenin'ny olona rehetra. Ny serasera am-bava dia zava-dehibe ho an'ny drafitra ny tilikambo, izay "hahatongavana ho eny amin'ny lanitra". Nefa io fifanandrinana io dia mifanohitra mivantana amin'ny baikon'Andriamanitra hitobaka sy hampitombo ny tany, ary noho izany dia nanapa-kevitra ny hamarana ny "fandrosoana" izy. Ahoana ny fomba nanaovany izany? Nafangaro ny fitenin'izy ireo izy, ka tsy azony natao ilay izy.
Saingy tamin'ny Fanekena Vaovao dia nisy fiandohana vaovao. Vondron'olona maro avy amin'ny firenena samihafa no tonga tany Jerosalema ary nivory tamin'ny Pentekosta mba hankalaza ny fetibe. Ny fetibe dia nitranga taoriana kelin'ny nanomboana an'i Jesosy sy nitsanganany tamin'ny maty. Izay rehetra nandre ny lahatenin'i Peter tamin'io andro io dia gaga be raha nahare azy nitory ny filazantsara tamin'ny fitenin'izy ireo! Na maheno na niteny ilay fahagagana dia nesorina ny sakana fiteny. Ny olona telo arivo dia ampy nahatakatra ny fahitana ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Tamin'izay no nanomboka ny fiangonana.
Hehy ny lela
Mety handratra na hanasitrana, mampalahelo na mampitolagaga ny teny. Rehefa nanomboka ny fanompoany i Jesosy, dia nahafaly ny olona ny teny feno hatsaram-panahy naloaky ny vavany. Tatỳ aoriana, rehefa niala ny mpianatra sasany, dia hoy Jesosy tamin’ny roa ambin’ny folo lahy: “Hianareo koa va mba te hiala? Simona Petera, izay mahalana no tsy nahay niteny, dia namaly azy hoe: “Tompo ô, hankaiza izahay? Ianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay » (Jo 6,67-68).
Betsaka ny zavatra nolazain'i James momba ny fampiasana ny lela. James dia mampitaha azy amin'ny tsilo iray izay ampy handoroana ala iray manontolo. Fantatsika tsara izany eto Afrika Atsimo! Ny teny vitsy mankahala ao amin'ny media sosialy dia mety hiteraka ady teny izay miteraka fankahalana, herisetra, ary fankahalana.
Ahoana àry no tokony hitondrantsika ny tenintsika Kristianina? Raha mbola nofo aman-drà isika dia tsy ho vitantsika tsara izany. Nanoratra toy izao i Jakoba: “Fa izay tsy diso amin’ny teny kosa dia olona lavorary.” ( Jakoba 3,2). Olona iray ihany no tonga lafatra; tsy misy tafita isika. Fantatr’i Jesosy tsara ny fotoana tokony hilazana zavatra ary ny fotoana tsara kokoa ny mangina. Imbetsaka ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna no niezaka ‘hisambotra azy tamin’ny teniny’, nefa tsy nahomby.
Amin'ny vavaka isika dia afaka mangataka ny hanehoantsika ny fahamarinana amin'ny fitiavana. Indraindray ny fitiavana dia "fitiavana mafy" rehefa ilaina tsy miteny. Azo atao koa ny mandinika ny fiantraikan'ny hafa sy ny fitadiavana ireo teny tsara.
Tadidiko tsara izany fony aho mbola kely, ary niteny tamiko i dada hoe: "Manana teny horesahina aminao aho." Mety hidika fotsiny izany fa ny anatra iray dia ho avy, saingy rehefa niantsoantso izy hoe "Efa nahazo teny ianao!" Midika ho zavatra tsara izany matetika.
Manome toky antsika i Jesosy hoe: “Ny lanitra sy ny tany ho levona; fa ny teniko tsy mba ho foana” (Mat 24,35). Ny andinin-teny tiako indrindra ao amin’ny Baiboly dia eo amin’ny faran’ny Apokalypsy, izay milaza fa Andriamanitra dia hanavao ny zava-drehetra, dia lanitra vaovao sy tany vaovao, izay tsy hisy fahafatesana intsony, na alahelo, na fitarainana, na fanaintainana. Hoy i Jesosy tamin’i Jaona: “Soraty, fa marina sady azo antoka izany teny izany!” (Apok 21,4-5). Ny tenin’i Jesosy sy ny Fanahy Masina mitoetra ao anatiny ihany no ananantsika sy izay ilaintsika mba hidirana ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra be voninahitra.